Politika · Jona, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Jona, 2011
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Jona, 2011
Espana: Olona an-jatony Manao Fihetsiketsehana Manohitra Ny Fitondràna Siriana
Eoropa Andrefana 30 Jona 2011
Anjatony maro ireo olona nanao fihetsiketsehana tao Madrid ny Alahady teo ho fanehoana fanohanana ny vahoaka Siriana. Nanofàna fiara vaventy fitateram-bahoaka mba hitondràna ireo olona avy any amin'ny tanana Espaniola hafa mihitsy, toa an'i Valencia sy Granada. Nangatahan-dry zareo ny hampodiana ny masoivoho Siriana ao Espana, ny ny hamaizan'ny governemanta Espaniola ny governemanta Siriana, tompon'antoky ny fanampenam-bava lehibe indrindra mahazo ireo mafàna fo Siriana nandritra ny taompolo maro.
Tailandy: Fampielezan-kevitra amin'ny ‘Fidio ny Tsia’
Azia Atsinanana 30 Jona 2011
Hilahatra any amin'ny biraom-pifidianana ireo Tailande amin'ny herinandro ambony ary na dia mitarika aza ny mpanohitra amin'ny toerana sasany, mbola tsy azo antoka tanteraka aloha hoe iza amin'ireo vondrona no hahazo ny fandresena. Niavaka tamin'ny fomba fanao hatramin'izay, fa nahitana fahafahana misafidy ny tsia ny vato ho an'ny mpifidy, ary hetsika amina fampielezan-kevitra no nokarakarain' Ny Vahoaka Miray hina ho amin'ny Demokrasia (People’s Alliance for Democracy - PAD) na ny Miakanjo Mavo (Yellow Shirts) handrisihana ny mponina mba hifidy ny 'Tsia'.
Syria: Ny Revolisiona sy ny Toekarena
Tato anatin'ny 100 andro; tsy nandroso tsy nihemotra ny toekarena tao Syria. Ny vanim-potoanan'ny fizahantany vao mitsidika io dia tsy mamelom-panantenana.Fanampin'izany, an'aliny ireo Siriana velon'ahiahy ka namadika ny tahiriny hiala amin'ny "Syrian pounds" hanjary dolara amerikana na Euros, nahatonga ny vola Siriana hizaka tsindry mavesatra.